एप्पलको बारेमा केहि चीजहरू टिम कुकले भनेका थिए म म्याकबाट हुँ
एप्पलको बारेमा केहि कुराहरु टिम कुकले भनेका थिए
मानुएल एलोन्सो | 17/06/2021 14:00 | हाम्रो बारेमा
एप्पल सीईओ टिम कुक, मा एक भर्चुअल अन्तर्वार्तामा भाग लिएको छ VivaTech सम्मेलन, जुन युरोपमा सबैभन्दा ठूलो सुरुवात र प्रविधि घटना मानिन्छ। कुकलाई गुइलाउम लाक्रोइक्स, सीईओ र ब्रूटका संस्थापक, मिडिया कम्पनीले छोटो-फार्म भिडियो सामग्री सिर्जना गरेको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। ऊ मुख्य रूपमा कुरा गरिरहेको छ कि उसले चलाउने कम्पनीले यसको एक प्रमुख मूल्यहरू प्रबन्ध गर्दछ: गोपनीयता।
हामीले गोपनीयतामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं एक दशक भन्दा बढी को लागी। हामी यसलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा देख्छौं। एक आधारभूत मानव अधिकार। स्टीव भन्ने गर्थे कि गोपनीयता भनेको सादा भाषामा बोल्दै थियो जुन मानिसहरूले सँधै तिनीहरूको अनुमति प्राप्त गरेर चाहन्छन्। र त्यो अनुमति बारम्बार सोध्नु पर्छ। हामीले जहिले पनि यसलाई बाँच्न प्रयास गरेका छौं। यदि सबैलाई चिन्ता छ कि कसैले अरूलाई हेरिरहेको छ भने, तिनीहरूले कम गर्न थाल्छन्, कम सोचिन। र कोही पनि त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संकुचित भएको संसारमा बस्न चाहँदैनन्। गोपनीयता एप्पलको एक मात्र मुख्य मूल्यको हृदयमा जान्छ।
1 गोपनीयता मात्र छलफल गरिएको थिएन। एप्पल सब भन्दा राम्रो हो भनेर व्यक्त गर्न पनि समय आएको थियो
2 एप्पल र वातावरण संग यसको सम्बन्ध को लागी अब समय छ। तर एप्पल कार को बारे मा केहि छैन
गोपनीयता मात्र छलफल गरिएको थिएन। एप्पल सब भन्दा राम्रो हो भनेर व्यक्त गर्न पनि समय आएको थियो
तर त्यहाँ उनीहरुका विपक्षीहरुलाई व्यवसायमा "पुलिता" दिन पनि आएको थियो। "GAFA" को बोल्दै, फ्रान्समा प्रयोग गरिएको एक्रोनिम जुन Google, Apple, Facebook र Amazon सँगै समूह गर्दछ। कुकले भने कि उनी त्यो विशेष संक्षिप्त मन पराउँदैनन् किनकि यसले "" सबै कम्पनीहरु प्रकृतिमा एकाधिकार छन्, "र ती कम्पनीहरु" का चित्र पेन्ट गर्दछ।बिभिन्न व्यापार मोडेल र बिभिन्न मान«। तर तलका कथनमा ध्यान दिनुहोस्:
यदि तपाईं एप्पललाई हेर्नुहुन्छ र तपाईं हामी के गर्नुहुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ, हामी चीजहरू गर्छौं। हामी हार्डवेयर, सफ्टवेयर र सेवाहरू निर्माण गर्छौं, र हामी यो सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दछौं कि त्यो चौबाटोमा, तिनीहरू एकसाथ काम गर्दछन्। हामी उत्तम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं, उत्तम होइन।
उनले प्रतिस्पर्धालाई चेतावनी जारी राखे कि उसको राम्रो, अझ विशेष र सबै भन्दा राम्रो हो। एन्ड्रोइड पनि आफ्नो वाक्यांशहरु को लक्ष्य थियो:
Aएनड्रोइडसँग आईओएस भन्दा times 47 गुणा बढी मालवेयर छ। किन ?. किनकि हामीले आईओएसलाई यसरी डिजाइन गरेका छौं कि त्यहाँ एक App Store छ र सबै अनुप्रयोगहरू समीक्षा गरिन्छ स्टोरमा प्रवेश गर्नु अघि। कुकले भने कि उनी छलफलको बारेमा आशावादी छन र एप्पलले जहिले प्रयोगकर्तालाई बचाउनेछ।
यद्यपि। कुक पनि सम्झाइएको थियो स्याउ असफलता र मुख्य कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई राम्रोसँग यो अनौंठो प्रश्न वा कथनको विरूद्ध बचाव गरे:
म केहि मा दैनिक विफल। हामी आफैंलाई विफल हुन दिन्छौं। हामी बाह्यको सट्टा आन्तरिक विफल हुन कोसिस गर्छौं किनकि हामी ग्राहकहरूलाई असफलतामा समावेश गर्न चाहँदैनौं, तर हामी चीजहरूको विकास गर्छौं र त्यसपछि सुरुवात नगर्ने निर्णय गर्छौं। हामी एउटा निश्चित मार्ग सुरू गर्छौं र कहिलेकाँही हामी प्रक्रियामा हामीले गरेको आविष्कारको कारण हामी उल्लेखनीय रूपमा समायोजन गर्दछौं। र त्यसकारण, बिल्कुल, असफलता जीवनको एक अंश हो र यो योको एक अंश हो, चाहे तपाईं नयाँ कम्पनी, एक स्टार्टअप, वा कम्पनी हो कि केही समयको लागि हो र बिभिन्न चीजहरू खोज्दैछ। यदि तपाईं असफल हुनुभएको छैन भने, तपाईं पर्याप्त बिभिन्न चीजहरूको कोशिश गर्दै हुनुहुन्न।
एप्पल र वातावरण संग यसको सम्बन्ध को लागी अब समय छ। तर एप्पल कार को बारे मा केहि छैन
कुकलाई कसरी एप्पलले आफ्नो वातावरणीय लक्ष्यहरू नयाँ उपकरणहरू शिपिंगको साथ मिलाउछ भनेर सोधेको थियो। हामीलाई थाहा छ कि एप्पलको योजनाहरू २० chain० सम्ममा आपूर्ति चेन कार्बनलाई तटस्थ बनाउने छ। “प्रयोगकर्ताका लागि उत्तम उत्पादन र ग्रहको लागि एक महान उत्पाद एकै समयमा सबैमा एक हुन सक्छ »कुकले भने।
अब, जब एप्पल कार को बारे मा सोध्नुभयो, इशारा परिवर्तन भयो र त्यसैले आफ्नो आसन। उनी अब धेरै कुरा गर्न उत्सुक थिएनन् र उनले वास्तवमै यस विषयको कुराकानी धेरै छिटो समाप्त गरे। "एक कार को मामला मा, म केहि गोप्य राख्न पर्छ।" «तपाईको आस्तीन माथि सधैं एक्सेस हुनुपर्दछत्यसैले मलाई लाग्दैन कि म भविष्यको एप्पलले निर्मित कारको अफवाहमा टिप्पणी दिन लागेको छु। "
तपाईं अन्तर्वार्ता हेर्न सक्नुहुन्छ को भिडियोमा ब्रटको यूट्यूब च्यानल।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एप्पलको बारेमा केहि कुराहरु टिम कुकले भनेका थिए
के तपाईं म्याकोस १२ बीटा स्थापना गरेकोमा पछुतो गर्नुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं म्याकोस बिग सुरमा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ
एप्पलले आफ्नो यूट्यूब खातामा लुकाएको पीसीहरूको बिरूद्ध आईप्याडको लागि विज्ञापन जाँच गर्नुहोस्